တရားဒေသနာ - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကထိုအချိန်ကတည်းကကျွန်ုပ်ကိုနှစ်သိမ့်မှုများစွာပေးသောသတင်းစကားကို ဦး ဆုံးအကြိမ်ကြားခဲ့ရသည်။ ၎င်းကိုယနေ့သမ္မာကျမ်းစာတွင်အလွန်အရေးကြီးသောသတင်းစကားတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်မှတ်ယူဆဲဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားပဲ။ ဘုရားသခင်သည်လူသားအားလုံးကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောလမ်းကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ယခုသူသည်သူ၏အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နေပြီဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်၌ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုအတူတကွရှာဖွေကြည့်ကြပါစို့။
ဒီနေ့တရားဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးသည် -“ ငါဟာဘုရားသခင်အတွက်လား၊ ယေရှုအတွက်လားအသက်ရှင်နေသလား။ ” ဤစကားများ၏အဖြေသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေပြီးသင်၏ဘဝကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်အတွက်အပြည့်အ ၀ တရား ၀ င်နေထိုင်ရန်ကြိုးစားခြင်းရှိမရှိ၊ ဘုရားသခင်၏ချွင်းချက်မရှိသောကျေးဇူးတော်ကိုယေရှုထံမှမခံစားထိုက်သောလက်ဆောင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်လက်ခံသည်ဖြစ်စေကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင် - ငါဟာယေရှုနဲ့အတူ၊ ဤတရားဒေသနာ၌ကျေးဇူးတော်ရှုထောင့်အားလုံးကိုဖုံးကွယ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသည် စိတ်ပျက်ဖွယ်မျှော်လင့်ချက်၏ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ လူသားများသည် ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခံရကြောင်း ပေါ်ထွန်းခြင်းမှ အစပြုပါသည်။ သို့သော် လူတို့သည် အပြစ်ပြုပြီး ပရဒိသုမှ နှင်ထုတ်ခံရပြီး မကြာမီပင်။ သို့ရာတွင် တရားစီရင်ခြင်း နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အတူ ကတိတော်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာသည်—ဘုရားသခင်သည် ဧဝ၏အမျိုးအနွယ်ထဲမှ တစ်ဦးသည် သူ၏ဦးခေါင်းကို နှိပ်စက်မည်ဟု စာတန်အား မိန့်တော်မူခဲ့သည် (က. 3,15). Ein Befreier würde kommen. Eva hat wahrscheinlich gehofft,…
ယေရှု၏နာမည်ကြီးပုံဥပမာတစ်ခု– လူနှစ်ဦးဆုတောင်းရန် ဗိမာန်တော်သို့သွားကြသည်။ တစ်ယောက်က ဖာရိရှဲဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ယောက်ကတော့ အခွန်ကောက်သူ (လုကာ ၁8,9.14). Heute, zweitausend Jahre, nachdem Jesus diese Parabel erzählt hat, könnten wir versucht sein, wissend zu nicken und zu sagen: „Klar, die Pharisäer, der Inbegriff der Selbstgerechtigkeit und Heuchelei!“ Gut ... aber lassen wir diese Einschätzung einmal beiseite und versuchen uns vorzustellen, wie das Gleichnis auf Jesu…
ဖိလိပ္ပိမြို့သားတို့အားပေါလုပေးခဲ့သောဆုံးမစကားကိုယနေ့ငါလိုက်နာရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ သူကမင်းကိုတစ်ခုခုလုပ်ဖို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ ငါဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုငါပြမယ်။ ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီးလုံးဝလူသားဖြစ်သည်။ သူ၏မြင့်မြတ်မှုကိုဆုံးရှုံးခြင်းအကြောင်းဖော်ပြထားသည့်နောက်ကျမ်းချက်ကိုဖိလိပ္ပိတွင်တွေ့ရှိရသည်။ «ယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်သဘောကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေတော်မူ။ ၊
ငါနှစ်ပေါင်းဝက်သားစားရန်တွန့်ဆုတ်ခဲ့ကြသည်။ ငါစူပါမားကတ်တစ် ဦး ၌ "veal ဝက်အူချောင်း" ဝယ်လိုက်တယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး က“ ဒီနွားတင်းကုပ်ထဲမှာ ၀ က်သားရှိတယ်” လို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်မယုံနိုင်ဘူး။ သေးငယ်တဲ့ပုံနှိပ်ထဲမှာ, သို့သော်, ကအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်၌ရှိ၏။ “ Der Kassensturz” (ဆွစ်ဇာလန်ရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲ) တွင်နွားစားခွက် ၀ တ္ထုကိုစမ်းသပ်ပြီးဤသို့ရေးသားခဲ့သည်။ သို့သော်နွားတင်းကုပ်နှင့်တူသောဝက်အူချောင်းတိုင်းတော့မဟုတ်ပါ။
“ညီအစ်ကိုတို့၊ အသက်ရှင်၍ သန့်ရှင်း၍ ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသော ပူဇော်သက္ကာအဖြစ် သင်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကို ပူဇော်ကြရန် ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာတော်အားဖြင့် ယခု ငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဝတ်ပြုရေးဖြစ်ပါစေ” (ရောမ ၁2,1). Dies ist das Thema dieser Predigt. Sie haben richtig bemerkt, da fehlt ein Wort. Neben vernünftiger Gottesdienst, ist unser Gottesdienst ein logischer. Dieses Wort ist vom Griechischen „logiken“ hergeleitet. Der Dienst zu Ehren Gottes ist…
အထူးသဖြင့်စက်မှုထွန်းကားသောကမ္ဘာကြီးရှိယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ဖိအားပေးမှုများခံနေရပြီးလူအများစုကတစ်ခုခုမှအမြဲတမ်းခြိမ်းခြောက်ခံနေရသည်ဟုခံစားရသည်။ ပြည်သူလူထုသည်အချိန်မရှိခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ရန်ဖိအားပေးမှုများ (အလုပ်၊ ကျောင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း)၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ၊ အထွေထွေမလုံခြုံမှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ စစ်ပွဲ၊ မုန်တိုင်းဘေးအန္တရာယ်များ၊ အထီးကျန်မှု၊ မျှော်လင့်ခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းစသဖြင့်ခံစားနေကြရသည်။ အနာ။
ယေရှု၏မြေကြီးဓမ္မအမှုအစတွင်အကြမ်းအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကပြောပြသည်။ သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့သွားခဲ့ပြီးရေကိုဝိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဤပုံပြင်သည်နည်းလမ်းများစွာတွင်ထူးခြားသည် - ထိုတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုသည်မက်ဆီကန်အလုပ်ထက်မှော်ပရိယာယ်နှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်ရှက်စရာကောင်းသောအခြေအနေကိုတားဆီးနိုင်သော်လည်း၎င်းအားတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်။ မရခဲ့သည်။
ယနေ့နံနက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏မှန်ရှေ့တွင်ရပ်။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးတွင်အဘယ်သူသည်အလှပဆုံးဖြစ်သနည်း။ ထိုအခါမှန်ကငါ့အားပြောလိုက်၏။ ငါမင်းကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ် -“ မင်းမြင်တာကိုယုံသလား၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အချက်တစ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြလိုသည် - ဘုရားသခင်အသက်ရှင်သည်၊ သူတည်ရှိသည်၊ ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဘုရားသခင်သည်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိပါ။
ငါတို့သမီးနဲ့သူ့မိသားစုကိုမကြာသေးခင်ကငါတို့လာလည်ပတ်ခဲ့တယ်။ ထို့နောက်ဝါကျကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်ဖတ်ခဲ့သည် -“ လွတ်လပ်မှုဆိုတာကန့်သတ်ချက်များမရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲအိမ်နီးချင်းကိုမချစ်ဘဲလုပ်နိုင်သောစွမ်းရည်ဖြစ်သည်” (Factum 4/09/49) ။ လွတ်လပ်မှုသည်အကန့်အသတ်မရှိခြင်းထက်ပိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်လပ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောတရားဒေသနာအချို့ကိုကြားသိခဲ့ရသည်၊ သို့မဟုတ်ဤအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော့်အတွက်တော့ဒီဖော်ပြချက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးအထူးအရာကတော့လွတ်လပ်မှုကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။